I'm Good Explained — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Waxa uu sheegay in anigu ma uu eedaysan yahay waa in kastoo aan weli aan la lahaa taariikhda maxkamadda my /
Tanu waa meesha ay kuwo badan oo rumaystayaasha heli nafteena. Waxaan ognahay in xanuunka, tijaabooyin, iyo malaha xataa dhimasho waa dhow. cabsi Our faqaan, dhagahanagana oo noo sheeg in maxkamad this waa dhammaadka wakhtigii dunida- in ay naga. Laakiin in aan waxa Rabbiga ayaa noo sheegay. Rabbigu wuxuu noo ballan-qaaday in aan lagu dhawaaqi doonaa oo aan eed isaga ka hor, maxaa yeelay, Masiix (Romans 4:5). Oo sidaas daraaddeed waxaan weligoodna ma lumi doonaan, (John 3:16). Dhimashada ma aha dhamaadka for Christian ah; waa bilowga cusub a, xaqiiqada quruxda leh more.
Waxaan dhadhamiyey oo aan isaga arkay, inkasta oo kaliya valg /
Maxaa yeelay, Ciise wuxuu u dhintay oo wuxuu i geeyey si ay Ilaah (1 Peter 3:18), Waxaan dhadhamiyey oo waan arkay, isagu waa wanaagsan. Laakiin wanaaggii uu Waxaan hadda dhadhamiyey waa kaliya valg. Maalin maalmaha ka mid I Eebahay kula jiri doonaa, iyo in buuxa la kulmaan wanaaggiisa.
Anigu garan maayo waxa ay dareensan tahay, Anigu garan maayo waxay fikirka /
Bro naftayda jabin karin sida Mario markuu bilig /
In line this, Waxaan ahaa isagoo yar xiiso leh tixraac Mario ah. Laakiin waxaan ahaa taxadir in aadan si ay sheegayaan in waxaan ahay jabin karin. Waxaan la dhaawacay karaa, Waxaan la niyad jabin karaa, xataa laygu dili karaa. Laakiin naftayda marnaba la dilay karin ama la wada baabbi'iyey, maxaa yeelay, ammaan ee Ciise ayaan ahay. Marka Super Mario helo in xiddiga bilig gaar ah, iyadoo aan loo eegayn waxa ay cadaawayaashooda uu ku egyahay galay, iyagu ma ay isaga dhaawici kara. Isla ayaa laga odhan karaa oo ah naf furtay. Waxaad jidhkayga Qaybo dooxi karo, laakiinse naftaydaan sii joogi doonaa dhawrsan. Oo Ilaah wuxuu u darbay magaalada inoo ah (Cibraaniyada 11:16).
Waxay igu arkaysaan inaan ka buuxa farxad, sida Anigu ma waxa uu la cabo /
Cup waxaa ka buuxa nool Bro biyaha, Anigu waxaan iyada u kabasho iyo isaga ku ammaani, Haa Mudane/
Dadka arkaan ii dagaal farxad ku dhex maxkamadda oo lagu khaldin. "Sidee ayuu u ilka karaa waqti sidaan oo kale ah?” Laakiin waxaan ahay ma waalan ama cabbay, ammaan ah waxaan ahay. Waxaan sipped sidoo nolosha weligeed ah ka, oo naftayduna way ku qanacsan yahay (John 4:13-14).
Anigu ma kordhiyo grammy a, ama heli kale hugaaminaya /
Laakiin waxaan abaal Eebahay heli doontaa, waxa fiican ma aha waxba /
laga yaabaa in anigu ma aan mar kale guiga, Anigu ma laga yaabaa iibiso milli a /
Laakiin waxaan la iibsaday by my King, weligiis uu ila /
Waxaan qeybtan maxaa yeelay qoray, indhaha adduunka ee height of guul for artist ah ayaa iibinaysa farabadan diiwaanada iyo helitaanka farabadan of aqoonsi. Laakiin xitaa haddii aan marnaba heli abaalmarinta kale ama dhul on shaxda kale, Waan fiicanahay. ma aan heli abaal dunida, laakiin waan heli doonaa abaalmarin Ciise. diiwaanka My laga yaabaa in aan la iibsaday by qof, laakiin aan horay loo iibsaday iyo furtay Ciise.
Sidaas waxa ay hadalka xumad? No ma ay soo dhaadhac oo ii garaaci kartaa /
Yessir waxaan dareemayaa xanuun, laakiin Ciise waa i hadda helay /
Mar labaad, Ma doonayo in dadka waawayn si ay u malaynayso in waxaan ula jeedaa dadka Masiixiyiinta ah ma maxkamad, ama xataa in aanan dareemi miisaankiisu wuxuu ahaa jirrabyadii kuwa. Waxaan inta badan soo food leh dhibaato aad u daran, laakiin Ciise waa noo leedahay.
Taasi waa sababta aan buuq samaynta, in sababta aan adag ordaya /
Taasi waa sababta aan u tago goriilla, iyaga ku candhuufay baararka daanyeer /
All of runta ayaan kor ku xusan ii qaadeysaa. Tani waa sababta aan warkan wanaagsan oo albums saaray. Tani waa sababta aan doonayaa in aan kaga tufay baararka in qabtaan dadka dareenka. Waxaan doonayaa in aan iyaga farta isha wax kasta oo wanaagsanu.
Partner aad ogtahay wanaagsan si ay u tagaan waxaan ahay /
Cadaadiska abuuraa dheeman iyo dab dahabka sifeeyo /
waxba meerahaas in uu naftayda dherginaya Waxaa /
Waxaan ku nool waayo, berrito, maanta waa out of control, fa Sho, Waan fiicanahay/
Qaado lacag dhan my, Waan fiicanahay/
Halkan yimaado xanuunka, Waan fiicanahay/
Haa way i dili karaa, Waan fiicanahay/
Si dhimashaduna waa ii faa'iido, Waan fiicanahay/
Waxaan maaha in aanan dareemin wax xanuun ah /
Waxaan kaliya ku yidhi aadan naga soo qaadan karaa ciyaarta,, Jidka homie waxaan wanaagsan /
lyrics Kuwani waa sharaxaadda is quruxsan. In macnaha guud ee this song "wanaagsan” micnaheedu ma aha kaamil ah ama kuwa xaqa on aniga ii gaar ah ayaan u ahay. Kitaabku waxaynu og nahay in aan run wax kasta oo naga mid ah (Romans 3:11-12). "Waan fiicanahay” waa hab kale oo wuxuu ku yidhi, "Waxaan ahay qabow” ama "Wax walba ayaa ok.” Maxaa yeelay, waxaan ku jirnaa Masiix, waxaad naga qaadan kartaa wax walba oo, laakiin aynu ku jirno wanaagsan, sababtoo ah waxaan nahay qotoma Masiix.
Waan ogahay in ahay xanuunsado, in ka dhigi doonaa oo kaliya igu adag /
Dhimashada waa xaq iridda ah si ay ii geyso my lover aamin /
Curisyada sida Acts 14:22 iyo 2 Timothy 3:12 i xusuusinayaa in sida isagoo Masiixi ah dulqaadan doono. Oo meelihii sida James 1:4-8 iyo Romans 8:28 i xusuusinayaa in Ilaah wuxuu isticmaalaa dhibaatada si ka badan sida Masiix iga dhig. tijaabooyin Kuwani xitaa laga yaabaa naftayda iga qaad, laakiin Mu'miniinta ma aha inay ka cabsadaan dhimashada. Ciise ayaa Micida baxay dhimashada, waana wax badan noo wanaagsanaan lahayd in la Ciise noqon badan inaan halkaan.
The jeclaa naftayda ay ila, aad gariirin karin walaalkiis ku /
Laakiin marna ma i hoos u garaacayaa doonaa ama i qaadi hoos, keeno onkodka /
Ha dabeylo ku timid inaad na noqnoqon oo na yeelin /
Ma qaadan karaan Rabbigeenna naga Bro uu na helay xukunka a /
Ma aha eed, Waxa uu nala sii joogo oo uu joogo /
Marna ha iga tago xitaa Wuxuu ii siinayaa joogitaanka yada /
Waxaa jira lix baararka final oo dhan markhaati furayaa, mid run dayada, Rabbigu waa ila. Oo wax walba oo dhaca, Waxa uu weli noqon doonaa ila. gabi ahaanba Waxaa jira wax ka jacaylka Ilaah oo ku jira Masiix iga sooci karo! (Romans 8:38-39)
Waxa ugu muhiimsan ee aniga igu saabsan waa xaqiiqada ah in aan la midoobin in Ciise. Taas marnaba la qaadan karaa iga. Wax kasta oo aan jid yimaado, Waxa uu i baray in la yidhaahdo, "Waxa ay si fiican waa la naftayda.”
M.J.S. • August 19, 2013 at 8:41 waxaan ahay • Reply
Solid, walaalkiis music awood. Waxaan daawaday video for “Waan fiicanahay,” oo waxaa iga tagay cajiib ah sida in sababta aad u dooratay goobta gabadha Muslim lagu xad-gudub jirka for reading Kitaabka Quduuska ah?
Muslimiintu waxay rumaysan yihiin in ALL Nabiyada Ilaah iyo Qorniinka ma ay keenin in dadyowga. Waxaa waa fikrad khaldan badankooda in Muslimiinta aan rumeynin Ciise a. Farqiga muhiimka ah ee aaminsan yahay in Muslimiinta ay fikirin Ciise sida Nabiga a, iyo in Islam ma mid Nabiga waxaa loo arkaa more la taaban karo ka badan oo kale.
My Ujeeddada for this post ma aha in ay ka doodaan diin laakiin in ay kala firdhinta is faham la'aan in ay joojiyaan faafinta macluumaad been ah. Anigu garan maayo waxa gaarka ah taasoo la micno aad loogu tala galay si uu u gudbiyo la goobta(in sababta aan weeydiin), laakiin si shakhsi ah u xumeeyaan nidaamka aaminsan Muslim saabsan Qorniinka.
Woleogundele • August 19, 2013 at 8:41 waxaan ahay • Reply
Loyd • August 19, 2013 at 8:41 waxaan ahay • Reply
Ma laga yaabaa in aad fadlan arrintan loo sameeyo, waayo, ogow Me. Xaqiiqdii waan jeclaan lahaa in ay ogaadaan habka fikirka aad on doorashada erayga. Gaar ahaan qaybta meesha aad taagtay in “Waxaan qoysaska qaar ka mid ah kala, Waxaan yaqaan in ay keeni burbur.” Waxaan leeyahay wax aan ka qaaddid oo u gaar ah oo ku saabsan aayaddan, laakiin waxaan doonayaa in aan ogaado waxa aad loogu tala galay. Waxaan fahamsanahay haddii aadan haysan markii ay tan u sameeyaan iyo ma dhididdaa. Ka dhig gaarey dadka Trip. Ma ya thang! Ilaah ammaan!
Leslie • August 19, 2013 at 8:42 waxaan ahay • Reply
My dhajiyay markii ugu horeysay :) Aad ayaan ugu faraxsanahay in aad posted this song iyadoo la tixraacayo Kitaabka iyo habka fikirka ka dambeeya lyrics aad ka ahay. Wiilkaygiiyow 9-sano jir ah oo aan labadaba aad music jeclahay, iyo inaan berri iska taagay inuu la qaataan waqti tayo leh qaar ka mid ah ka hor inta aan koraan weekend Easter ah. Ma sugi karo in ay dhinac-ilaa-dhinac fadhiisan isaga la in ay dhex maraan lyrics kuwaas oo kor eega, Qorniinku wuxuu la mid kasta. Waxa uu noqon doonaa faraxsan! Ku mahadsan tahay in aad safar, jacayl badan ka Orlando, FL!!
Wayland Wilson • August 19, 2013 at 8:42 waxaan ahay • Reply
Faraxsanahay in aan halkan aad aagga DC. Waxaan mararka qaarkood laga lalmiyaa in Chinatown Hope in Orod aad galay mararka. Peace.
Brandon Caron • August 19, 2013 at 8:43 waxaan ahay • Reply
Ugu faraxsanahay in la ogaado in aad leedahay blog a. waxay yeelan doonaan si ay u bilaabaan hubinta in waqti ka waqti. Waxaan ka warqabin.
Aaron Fillmore • August 19, 2013 at 8:43 waxaan ahay • Reply
Waxaan jecel feelin dhaqaaqo Ruuxa jirdhiska dhagaysto this…dadka weydiin waxa aan dhagaysto aad u-aan em sheegi #imgood
migisha Boyd • August 19, 2013 at 8:43 waxaan ahay • Reply
cadaab akwongele! _luganda waayo, Ilaah ha idiin barakeeyo”
Shola Rock • August 19, 2013 at 8:43 waxaan ahay • Reply
Ka dhig heeso raab ah, Masiixu wuxuu u. Waan jeclahay albums oo dhan. All yihiin Masiix xuddun iyo kitaabiga. Codkaaga sidoo kale waa qabow Laxankana aad isticmaalayso waa laga cabsado; Ilaahay ha barakeeyo aad Bro!!!
Kananelomojaki • August 19, 2013 at 8:43 waxaan ahay • Reply
nice mid GNU
Henock Teshome • August 19, 2013 at 8:44 waxaan ahay • Reply
alaabtii Good iyo Waad ku mahadsan tahay sharaxaad ka.
Tina • August 21, 2013 at 11:18 waxaan ahay • Reply
Wiilkaygiiyow (9) oo i murtida this song! Noocan oo kale ah macnaha ah mid laga cabsado oo xoog badan iyo gadaashiisa, :)